Pallet flow rack, anyị na-akpọkwa ya racks ndị siri ike, mgbe anyị chọrọ pallet a ga-akwaga nke ọma na ngwa ngwa site n'otu akụkụ gaa n'akụkụ nke ọzọ na-enweghị enyemaka nke forklift na ebe eburu ụzọ, nke mbụ (FIFO), mgbe ahụ Pallet na-asọba racks ga-abụ nhọrọ kacha mma maka gị.
Ugboro Stacker crane nweta pallets n'okporo ụzọ ụgbọ oloko dị n'akụkụ abụọ. Ihe ngwọta a na-ebelata ọnụego zuru oke mgbe ị na-enye nchekwa njupụta dị elu, ma jiri oke ala na oghere kwụ ọtọ.
Sistemụ ngwongwo pallet
Pallet racking bụ usoro ihe eji eji ihe eji echekwa ihe iji chekwaa ihe ndị nwere palletized. E nwere ọtụtụ ụdị pallet racking, nhọrọ nhọrọ bụ ụdị kachasị, nke na-enye ohere maka ịchekwa ihe ndị palletized na ahịrị kwụ na ọtụtụ ọkwa.
Akwa Carton Flow Rack
A na-etinyekarị Carton Flow Rack maka nchekwa ngwa ọrụ igwe site na nrụpụta na ịtụtụ usoro site na ebe a na-eji arụ ọrụ. O nwere uzo abuo: uzo nkpuchi na uzo eji agba mmiri. A na-edozi okporo ụzọ ahụ na-agba ọsọ na ọdụ ụgbọelu.
Mbanye na racks na-eji oke nke oghere na vetikal site na iwepu ụzọ ọrụ maka ụgbọala forklift n'etiti racks, forklifts na-abanye n'okporo ụzọ nchekwa nke ụgbọala-na racks iji chekwaa ma weghachite pallets.
Sistemụ mgbagharị nke ụgbọ mmiri bụ sistemụ nchekwa dị elu nke na-eji shuttles iji na-ebu pallets ebujuru na-akpaghị aka n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na ogbe ahụ.
Egwuregwu eletriki mkpanaka eletriki bụ sistemụ dị elu maka ịchekwa ohere na ụlọ nkwakọba ihe, ebe a na-etinye racks na chassis mobile na-eduzi site na egwu na ala, ọ bụ ezie na nhazi dị elu nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị egwu.
Sistemụ ụgbọelu mgbagharị ahụ nwere ihe mkpuchi redio, ndị na-ebu ya, ndị na-ebuli elu, ndị na-ebugharị, racks, sistemụ njikwa yana usoro njikwa ụlọ nkwakọba ihe. Ọ bụ sistemụ arụmọrụ zuru oke maka nchekwa echekwara nke ọma
Usoro nchekwa na ichekwa ihe na-akpaghị aka (AS / RS) na-enwekarị racks, ọdụ ụgbọ mmiri, ndị na-ebugharị na usoro nchịkwa ụlọ nkwakọba ihe nke na-ejikọ usoro sistemụ nkwakọba ihe.
Pallets nchara bụ ezigbo ihe eji edochi ngwaahịa maka pallets osisi na pallets plastik. Ha dị mma maka ọrụ forklift na adaba iji nweta ngwongwo. Tumadi eji maka otutu-nzube ala nchekwa, shelf nchekwa
Usoro nchekwa dị mma nwere ike ịbawanye ohere nchekwa ma chekwaa ọtụtụ oge ọrụ, Push back rack bụ sistemụ dị otú ahụ nke na-eme ka ebe nchekwa dị elu site na mbenata aisles maka forklifts na ịchekwa oge ndị ọrụ na-agba ọsọ n'okporo ụzọ egwu dị ka ihe na-eme na draịva racks.